RW Rooble maxaa laga fili karaa muddada Kooban? - WardheerNews
RW Rooble maxaa laga fili karaa muddada Kooban?
W/Q Cabdikariim C/raxmaan Xaaji Xasan
Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo in muddo ah ay u aheyd sidii guul uu gaadhay (accomplishment), islamarkaana ku faana wada shaqeyta ka dhaxeysay Ra’iisal Wasaarihiisi hore ee Xasan Cali Khyre, laguna xsuusto hadaladiisii “Waxaan idiin keenay Ra’iisal Wasaare iga fiican,” ayaa bishii Julay 25-dii muddo 7 daqiiqaddood gudahood shaqadii kaga tuuray Kheyre.
Md Rooble iyo Guuleed
RW Kheyre oo muddadii uu xilka hayay aan kasban saaxiibo dhow, islamarkaana dad badani u arkayeen shakhsi isqaad-qaad iyo islaweyni madhani ay indho tirtay, ayaa cayrintiisu aysan yeelan wax culeys siyaasaddeed ama saameyn ah oo soo food-saarta Farmaajo.
Md. Kheyre oo si sharciga ka fog looga qaaday xilkii Ra’iisal Wasaaraha, islamarkaana Baarlamaanka oo xildhibaaano kor u dhaafay 70 ay ka mid ahaayeen golihiisa Wasirraddu, aynan ka dooddin sababaha xilka looga qaaday, ama in la siiyo fursad uu Baarlamaanka hortiisa iskaga difaaco eedaymaha lagu soo oogay, ayaa si fudud u aqbalay sharci daradaasi lagula kacay.
Arintan ayaa dad badani ku tilmaameen in ay marag u tahay sida markaasi Md. Kheyre aanu wax miisaan ah lahayn, balse uu dadka tusayay waji humaag ah (fake image), intii uu xilka hayay!
Shirkii wadatashiga Dhuusamreeb 2
Madaxweyne Farmaajo oo aan la iman qorshe wax qabad, muddo xileedkiisiina ku dhamaystay burburinta iyo la dagaalanka Dowlad Gobolleedyada, hoggaankii Golaha Shacbiga iyo Aqalka Sare , ayaa abuuray in uu kasbado dad badan oo mucaarad ah intii uu hoggaanka dalka hayay.
Waxa jirtay ka gadaal xilka qaadistii Md. Kheyre, in uu Farmaajo si ula kac ah uu dalka galiyay muddo ku dhow 2 bilood marxalad Dowlad la’aan ah, taasi oo baalmarsanayd Dastuurka dalka. Waxa la yaab noqotay in danleydii siyaasiyiinta ee isku tilmami jiray in ay ka soo horjeedaan fashilka ku yimid hoggaanka Farmaajo, lagu arkay mar kaliya iyaga oo sidii shinnidii ku xoonsan Villa Soomaaliya, oo raajicanaya jagada RW ee bananaatay!.
Haddaba Madaxweyne Farmaajo ayaa bishii Sebtember 17 u magacaabay Md. Maxamed Xuseen Rooble Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Dowladda Federaalka Soomaaliya. Md. Rooble oo ah shakhsi ku cusub dhinaca siyaasadda Soomaaliya, balse ah xirfad yaqaan (professional), ayaa magacaabistiisu ku soo beegantay marxalad adag oo kala guur ah oo uu dalku ku jiro, khaasatan dhinaca u diyaarinta dalka ee doorashada Xildhibaanada iyo Madaxweynaha ee 20/21.
RW Rooble oo muddo xileedkiisu ku kooban yahay muddo 3 billood ku dhow, ayaa lagu wadaa in uu dhawaan soo dhiso golihiisa xukuumadda, iyada oo ay la gudboon tahay laba arimood ama waddo in uu mid qaato:
1) In aanu waxba ka badalin Xukuumadda hadda jirta ee uu horay u soo dhisay RW Kheyre. Dadka arinkan qaba islamarkaana dhawaan kula taliyay Md. Rooble waxaa ka mid ah Madaxweynihi hore ee Puntland Md. Cabdiwali Gaas, oo horey u ahaa RW KMG – Soomaaliya.
Md. Cabdiwali Gaas
Md. Cabdiwali oo horey ugu fashilmay muddadii uu talada Puntland hayay, ayaa argtidiisa ku wajahan in aanu RW Rooble waxba ka badalin xukuumaddi hore ay tahay mid fadhiid ah, oo aan waxba ku soo kordhinayn dardargelinta iyo rajo abuurka dalka, oo intii uu Farmaajo madaxweynaha ahaa dib u dhac badani ku yimid, xaga wada shaqeynta Dowladda Federaalka iyo Dowlad Gobolleedyada, amniga, horumarinta dhaqaalaha. Aragidaas ah in Golaha Wasiiradda sida ay hadda yihiin loo dhaafo, waa jug-jug meeshaada joog.
2. In uu RW Rooble la yimaado qorshe xukuumad cusub, oo ay ka muuqdaan dad dalka u diyaarin kara marxaladda kalaguurka, islamarkaana uu noqon kara dhaxal (legacy) lagaga daydo.
Runtii haddii uu RW Rooble soo magacaabo xukuumad tayo leh: 1) oo ay ka reeban yihiinn xubnaha Xildhibaanada uu wakhtigoodii gabaabsiga yahay, iskuna diyaarinaya doorashada sanankan, 2) soo xusho dad maamuus iyo aqoon leh iyo 3) ka takhaluso agaasimaha Nabad Sugida (NISA) oo saameyn xooggan ku leh fadhiidnimada iyo dib u dhaca ku yimid dalka , waxaa abuurmaysa rajo iyo wada shaqeyn wanaagsan oo dhex marta mucaaradka iyo sidii dalku u gaadhi lahaa xasilooni siyaasaddeed, doorasho xal iyo xalaal ah.
Waxa aan filayaa hadii uu RW Rooble yeesho qorshe wax qabad iyo higsi dhow, muddo xileedkiisa kooban, oo uu u madax-banaanaado, waxa suurta gal ah in uu dalka u horseedi karo rajo iyo dariiq fiican oo ka saarta dalka maraxalda kalaguurka islamarkaana ku dayosho muddan.
Gabagabadii maxaa laga filan karaa RW Rooble 1) waxba 2) mise?
Arimahan oo dhan waxa laga qiyaas qaadan karaa hadba go’aanka iyo waddada uu raaco.
Cabdikariim C/raxmaan X. Xasan